Finlandy - Wikipedia
Suomen tasavalta ((fi))
Republiken Finland sv
Repoblikan’i Finlandy ((mg))
Teny ofisialy teny finoa, teny soedoa
Tanàna ngeza indrindra Helsinki
- Praiminisitra Repoblika ara-antenimiera
- hakitroka faha 109
5 279 228 mpo.
Anaran'ny mponina Finlandey
IDH (2008) Mihakatra 0,959 (avo) faha 12
Sandam-bola Euro (EUR¹)
Faritr'ora UTC +2
Hiram-pirenena Maamme (Ny tanindrazanay)
I Finlandy dia firenena any Eorôpa Avaratra ao amin'ny Vondrona Eorôpeana hatry ny taona 1995.
Ny Finlandy dia manana morontsiraka eo amin'ny ranomasina Baltika, indrindra eo amin'n gôlfan'i Bôtnia ary ny gôlfan'i Finlandy any atsimo. Ny tany misy an'i Finlandy dia any ivelan'ny tanjona Skandinava, any avaratra andrefan'i Rosia ary any atsinanan'i Soeda ; ny faritra avaratr'i Finlandy dia any avaratry ny Faribolan-tendrontany Arktika.
Io toerana io dia tratra ny hatsiaka ary ngazana an-tapany mandritry ny andro ririnina, ny 5,3 tapitrisa mponina isain'ny demôgrafiam-pirenena dia manao an'i Finlandy firenena anisan'ny firenena kely hakitroky ny mponina indrindra eto an-tany. Ny ankabeazan'ny olona mipetraka any Finlandy dia mipetraka any atsimony, misy ny renivohitra Helsinki, sy ny tanàna lehibe, toy Espoo sy Vantaa, ao amin'ny Faritanin-drenivohitra. Ny finlandey dia manana teny ôfisialy roa, ny teny finoa ary ny teny soedoa, ary ao anatin'ireo teny ireo, Suomi sy Finland ny anaram-pirenena.
1 Fiteny any Finlandy
Fiteny any FinlandyHanova
Ny teny ofisialy any Finlandy dia ny fiteny soedoa sy ny fiteny finoa.
Ny fiteny finoa dia fiteny mpampitangorona ao amin'ny vondrom-piteny finô-ogrianina, miaraka amin'ny fiteny estoniana, ny fiteny same (lapôna) sy ny fiteny hongariana. Ireo fiteny telo ireo dia samihafa amin'ny fiteny hafa tenenina ao Eoropa ao satria, tahaka ny fiteny baska, tsy fiteny ao amin'ny vondrom-piteny indô-eoropeana ireo teny ireo.
Ny fototry ny fiteny finoa dia voasoratra ary nataon'i Mikael Agricola (arsevakin'i Turku) fehezan-dalana, nanoratra boky tamin'ny 1543.
Ny teny « finoa » sy « finlandey » dia samy ampiasaina amin'ny teny malagasy mba hanonona ny fiteny. Ny fomba matetika ampiasiana amin'ny teny malagasy dia manasaraka ireo teny roa ireo :
Ny teny « finoa » dia ampiasaina mba hanonona ny zava-mitranga ara-tantara sy ara-etnôlojia ary azo ampiasiana mba hanonona ny mponina sy ny fiteny : noho izany, tenenina « teny finoa », « finoa taloha » (nipetraka tsimoramora tao finlandy hatry ny -500), sns. Fa, tsy afaka tenenina hoe petrahan'ny finoa ny finlandy, tsy ny finoa irery ihany no mipetraka ao Finlandy, ary io teny io dia midika zavatra hafa fa tsy amin'ny lafin'ny demografia fotsiny.
Ny teny « finlandey » dia midika olom-pirenena mipetraka ao Finlandy, firenena 'teraka' na nahazo fahaleovantena tamin'ny 1917.
Ny ankamaroan'ny mponina mipetraka any Finlandy any dia miteny finoa (91,6%-n'ny mponina eo ho eo, araka ny demografian'i Finlandy) ary misy koa ny olona miteny soedoa (3 hetsy eo ho eo) ary mponina kely an'isa miteny Lapôna ; avinavìna any amin'ny 1 500 any ho any ny olona miteny io fiteny io ao Finlandy. Miampy amin'izany koa mponina Rom be an'isa (1 hetsy eo ho eo). Any Finlandy izany dia misy olom-pirenena Finlandey finoa ary soedoa (fa ny mpiteny soedoa rehetra akory dia tsy voatery manan-drazana soedoa), misy hafa manan-dreazana soedoa miteny soedoa na miteny finoa (ny soedoa taloha niova tenin-dreny), ny same miteny finoa (ary tsy mahay miteny sami intsony).
Ny saritan'i Finlandy tamin'ny 1920-1930
Ny Finlandy dia, nandritry ny taona Afovoany, hatramin'ny taonjato faha 19, singan'ny fanjakan'i Soeda. Tao ambanin'ny fanjakan'i Rosia izy tamin'ny 1809 hatramin'ny 1817. Mandritra io fotoana io, diose be mizaka tena izy. Ady maro tamin'ny Soeda sy ny Rosia dia nitranga tany finlandy, indrindra io amin'ny misy ny rova soedoa an'ny Suomenlinna (Sveaborg amin'ny teny soedoa), eo am-pidiran' Helsinki.
Ny Finlandy dia firenena any avaratra indrindra any Eoropa. Iray ampahan-telon'ny taniny dia any avaratry ny faribolan-tendrontany avaratra. Ny Finlandy dia mizara sisintany amin'i Soeda any andrefana, ny Norvezy any avaratra ary amin'i Rosia any atsinanana. Ny amorontsirany dia misokatra eo amin'ny ranomasina Baltika : any andrefana, ny gôlfan'i Bôtnia, ary any atsimo ny gôlfan'i Finlandy.
Ny ankabeazan'ny velarantan'i Finlandy dia mipetraka eo amina fanambany (socle) hersiniana nopasohin'ny ranomandry. Tamin'ny ranomandry nitsonika tamin'ny faran'ny Fivaingan'i Würm, ny endriky ny faritra dia vohitra vita vatomainty (granita) feno farihy sy farihikely. Ny Finlandy dia firenena manam-belarantany 338 145 km², ary 33 522 km² amin'ireo no farihy, miisa 187 888. Ny rano any Finlandy dia folo isan-jaton'ny velarantany. Eo anivon'ny firenena, ny farihy Saimaa dia farihy faha efatra ngeza indrindra ao Eoropa, miaraka amin'ny velarany 4 400 km².
Ny Finlandy dia firenena namoronana ny marika Nokia, orinasa lehibe mpanamboatra finday, ohatra : Kone, Outokumpu, Rautaruukki, Amer Sports, Fiskars, UPM-Kymmene, Stora Enso, Patria, F-Secure, Tieto, Marimekko, VR-Yhtymä Oy...
Ny isan'ny olona afaka miasa dia misy 2,66 tapitrisa. Ny vola ampiasain'i Finlandy dia ny Euro, vola nanomboka nampiasainy tamin'ny 1 Janoary 1999.
Ny Finlandy dia faha sivy amin'ny FPO na Famantaram-pivoaran'ny Olombelona tamin'ny 2007.
Ny demôgrafian'i Finlandy an-tsary
Isam-ponina : 5 255 580 mponina (faran'ny 2005)
Isam-ponina araka ny taona : 0-14 taona : 18 % ; 15-64 taona : 66,97 % ; + 65 taona : 15,03 %
Halavam-piainan'ny lehilahy : 74 taona (tamin'ny 2001)
Halavam-piainan'ny vehivavy : 81 taona (tamin'ny 2001)
Taha fitombohan'ny isam-ponina: 0,16 % (tamin'ny 2001)
Taha ny fiterahana : 10,69 ‰ (tamin'ny 2001)
Taha ny fahafatesana : 9,75 ‰ (tamin'ny 2001)
Fahafatesan'ny zaza : 3,79 ‰ (tamin'ny 2001)
Zaza/vehivavy : 1,7 enfant/femme (tamin'ny 2001)
Taha ny Fifindramonina : 0,61 ‰ (tamin'ny 2001)
Ny sauna dia anisan'ny evan'ny kolontsaina finlandey
Ho azy manokana ny kolontsaina finlandey, ary samihafa amin'ny firenena akaikiny ny azy. Na dia taonjato iray aza izy no voatery lasa singan'ny firenena Rosy, firenena mizara sisintany aminy y , ny fianjadian'ny rosy dia kely kokoa nohon'ny fianjadiana soedoa na alemana. Ny fitiavan-kolontsain'ny finlandey dia teraka tamin'ny taonjato faha 19, tamin'ny Finlandy mbola anisan'ny faritra Rosy, ny vokatr'io fanjanataniana io dia ny fitiavan-tanindrazana.
Albania - Alemaina - Andôra - Aotrisy - Belzika - Bielôrosia - Bolgaria - Bôsnia-Herzegôvina - Danemarka - Espaina - Estônia - Fanjakana Mitambatra - Finlandy - Frantsa - Grisia (na Gresy) - Hôngria (na Hongaria) - Irlanda - Islandy - Italia - Jeôrjia - Kipra (na Sipra) - Krôasia (na - Krôatia) - Letônia - Liktenstaina - Litoania - Loksemborga - Masedônia Avaratra (na Makedônia Avaratra)- Malta - Môldavia - Môntenegrô - Nederlandy - Nôrvezy - Okraina - Pôlônia - Pôrtogaly - Tsekia - Romania - Rosia - San-Marîno - Serbia - Slôvakia - Slôvenia - Soeda - Soisa - Tsekia - Vatikàna.
((fr)) Antenimieran'i Finlandy Archived Septambra 5, 2008 at the Wayback Machine
((sv))((fi))((en))Governemanta finlandey Archived Janoary 26, 2012 at the Wayback Machine
((fr)) Sehatra ofisialin'ny fizahantany finlandey
I Wikimedia Commons dia manana aino aman-jery mikasika an'i : Category:Finland
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Finlandy&oldid=1040907"
Dernière modification le 4 Desambra 2021, à 08:34
Voaova farany tamin'ny 4 Desambra 2021 amin'ny 08:34 ity pejy ity.